MF 1k S50 Chip + EM4102 Chip Composite Card ကို, MF 1k S50 Chip + ID ကို Chip Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို
 » RFID Card ကို » dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို
dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို M1 S50 Chip+EM4102 Chip Dual Frequency Card, M1 S50 Chip+ID Chip Dual Frequency Card, MF 1k S50 Chip + ID ကို Chip Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို, MF 1K S50 Chip+TK4100 Chip Composite Card, MF 1K S50+EM4102 Composite Chip Card, MF 1K S50+TK4100 Composite Chip Card, MF IC S50+EM4102 Composite Chip Card
RFID ချစ်ပ်: TK4100 + MF 1k S50 (EM4102 နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက် TK4100)
ပရိုတိုကောစံချိန်စံညွှန်းများ: ISO / IEC 14443 TypeA
အကွာအဝေး Read ရေး: 2.5~ 10cm (အဆိုပါအင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်ကဒ်စာဖတ်သူကိုနှင့်ဆက်စပ်သော)
Read နှင့်အချိန်ကိုရေး: 1-2ဒေါ်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 85 ℃ (စိုစွတ်ခြင်း 90%)
အရွယ်: CR80, 85.5× 54 × 0.84mm, သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားသော
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: PVC, ကို ABS, ပေ, PETG, စက္ကူ; 0.13 ကြေးနီဝါယာကြိုး
encapsulation တွေကိုသေချာမှုလုပ်ငန်းစဉ်: Ultrasonic လှိုင်းမော်တော်ယာဉ်စက်ရုံလိုင်းများ, အော်တိုဂဟေ
M1 S50+EM4102 chip LF+HF dual frequency compound chip card is compounded by high frequency and low frequency chip, two kinds of frequency each other is not interference, is the highest technical content, the most complete of function of intelligent induction card. Main characteristic is the "one card is multi-purpose", လုံခွုံသော, အဆင်ပြေ, wear-ခုခံ, fast and low cost.
တဦးတည်းကတ် Solutions, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, entrance card, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, staff attendance card, canteen card, VIP ကဒ်, such as community Banks, ကျောင်းများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ.
I am interested in your product MF 1K S50 Chip+EM4102 Chip Composite Card, MF 1k S50 Chip + ID ကို Chip Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို
prev: Long ကအဝေးသင် 125KHz + 13.56MHz Dual-ကြိမ်နှုန်း Card ကို, Long က Range EM4200 + FM11RF08 Composite Chip ကဒ်
နောက်တစ်ခု: တစ်ခုမှာ Tag ကိုမှာ NFC + Mifare IC S50 နှစ်ဦး,2တွင် 1 NFC ကိုဆန့်ကျင်အတု Tag ကို
တစ်ခုမှာ Tag ကိုမှာ NFC + Mifare IC S50 နှစ်ဦး,2တွင် 1 NFC ကိုဆန့်ကျင်အတု Tag ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF + LF dual-အကြိမ်ရေ Card ကို, ဂြိုလ်သား h3 + EM4102 dual-အကြိမ်ရေ Card ကို
JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ် (14)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (60)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (18)
လက်ပတ် / လက်ကောက် (18)